နော်ဝေတွင်မည်သည့်အရာကိုကြည့်ရမည်နည်း Absolut ခရီးသွားခြင်း
လူးဝစ် Martinez | | နော်ဝေ
နော်ဝေတွင်ဘာကိုမြင်ရမည်ကိုရှင်းပြခြင်းသည်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည် Aurora borealisအလွန်ကြီးမားသော fjordsအဖိုးတန် နော်ဒစ်မြို့ကြီးများ y ပျောက်ဆုံးရွာ အပြည့် အာတိတ်စက်ဝိုင်း။ ဒါပေမယ့်လည်းဒဏ္byာရီများကလူနေထူထပ်ရှေးဟောင်းနိုင်ငံများမှ ဗိုက်ကင်း နှင့်ခေတ်သစ်တိုင်းပြည်အတွက်ရှေးဟောင်းအစဉ်အလာ၏။
စကင်ဒီနေးဗီးယားကျွန်းဆွယ်မှာလိုပဲ Suecia o ဖင်လန်စတုရန်းကီလိုမီတာသုံးရာကျော်ကျယ်ဝန်းပြီးနော်ဝေသည်၎င်းရေ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုခံနေရသည် Barents ပင်လယ် နှင့်တကျိပ်တပါးသောအုပ်ချုပ်ရေးဒေသများသို့ဏခွဲ Fylkers အရင်တစ်ခုထက်ပိုလှတယ်။ နော်ဝေတွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နောက်လိုက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 အဘယ်အရာကိုနော်ဝေတွင်တွေ့မြင်: မြို့ကြီးများနှင့်သဘာဝ
1.1 အော့လို၊ ရှေးခေတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ
1.2 Tromso, မြောက်ပိုင်းအလင်း၏တိုင်းပြည်
1.3 သစ်သားအိမ်များ၏မြို့ Bergen
1.4 Alesund သည်နော်ဝေတွင်တွေ့ရမည့် fjords ၏နောက်ထပ်အစဖြစ်သည်
1.5 Trondheim သို့မဟုတ်နော်ဝေ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာအဘယ်အရာကိုမြင်ရန်
1.6 မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့သွားသော Svalvard ကျွန်းများ
1.7 Kristiansand, နော်ဝေတွင်ကြည့်ရှုရန်ကမ်းခြေ
1.8 နော်ဝေးအရှေ့ပိုင်း: အံ့ဖွယ်ချိုင့်များနှင့်တောင်တန်းများ
ငါတို့နော်ဝေကိုမြို့တော်ကိုစမယ်။ ေအာ္စလိုနိုင်ငံ၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းဒေသများသို့ခရီးဆက်သည်။ မင်းတို့ကအံ့သြဖွယ်ရာအထိမ်းအမှတ်များနှင့်ရှုခင်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
၁၈၇၇ ခုနှစ်အထိCristianíaလို့ခေါ်ပြီးလူ ဦး ရေခုနစ်သိန်းနီးပါးနဲ့အတူကိုပင်ဟေဂင်နဲ့စတော့ဟုမ်းတို့အကြားစကင်ဒီနေးဗီးယားမှာတတိယမြောက်မြို့တော်ဖြစ်တယ်။ ၁၃၁၄ ခုနှစ်မှ စ၍ ဘုရင်သည်တိုင်းပြည်၏မြို့တော်အဖြစ်တည်ရှိခဲ့သည် Haakon V သူကအဲဒီမှာတရားရုံးတည်ထောင်ခဲ့သည်။
မွို့၌အထင်ရှားဆုံးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Akershus ခံတပ်လွန်ခဲ့သောအနှစ်ခုနစ်ရာကတည်ဆောက်ခဲ့သော ၁၆ ရာစုတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းစတိုင်နှင့်အညီပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အခြားနောက်ဆက်တွဲအဆောက်အ ဦး များကိုလည်းထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သူတို့အားအဆောက်အ ဦး များထဲမှ၌သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် နော်ဝေတော်လှန်ရေးပြတိုက်ဂျာမနီကို ၁၉၄၀ မှ ၁၉၄၅ အတွင်းအတိုက်အခံများ၏သမိုင်းကိုစုဆောင်းခဲ့သည်။
အော့စလိုသို့သွားရန်သင့်အားအကြံပေးသည့်အခြားမြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသည်အလွန်ကြီးမားသည် တော်ဝင်နန်းတော်, neoclassical စတိုင်; အဆောက်အ ဦး မင်းသမီး o နော်ဝေနိုင်ငံပါလီမန်၊ ဒီကဗျာ မြို့အမှုအရေးဆောင်ရွက်ရာအဆောက်အဉီနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုချီးမြှင့်ခံရခြင်းနှင့် Vigeland ပန်းခြံ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုပေးသောအနုပညာရှင်၏ပန်းပုပြပွဲ၏အမြဲတမ်းပြပွဲအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်သည်။ Gustav Vigeland.
ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Oslo ၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် Saint Olaf ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအဆုံးစွန်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး Neo- Gothic စတိုင်ရှိပါတယ်; အဖြစ် Gamle Aker နှင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအသင်းတော်များRomanesque သည်မြို့တော်၏ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ပန်းချီဆရာကိုရည်စူးတဲ့ပြတိုက်လိုမျိုးပြတိုက်တွေကိုမကြည့်ဘဲအော်စလိုကိုမထွက်သင့်ဘူး Edvard Munch နှင့်အရှိဆုံးစပ်စု Kon-Tiki, နော်ဝေစွန့်စားအကြောင်းကို Thor Heyerdhal, အ ဗိုက်ကင်းသင်္ဘောများ။ အဆိုပါမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ နော်ဝေလူမျိုးအာကာသထဲမှာမင်းကအိမ်တစ်အိမ်လုံးကိုမင်းရဲ့အိမ်တွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့အတူပြသထားတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထဝီအနေအထားအရ (နိုင်ငံရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သော) ဒေသအတွင်းဖြစ်သောထရမ်စို (Thomso) ကိုကြည့်ရှုရန်နော်ဝေးမြောက်ဘက်သို့ခုန်ဆင်းသွားသည် Lapland။ ဒါဟာမှ၎င်း၏အမည်ကိုကြာပါသည် tromsoya ကျွန်း, မြို့အလယ်ဗဟိုတည်ရှိရာ။
အဲဒီမှာသင်ကဲ့သို့သောဘုရားကျောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် ရှေးဟောင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ပြီး၎င်းကဲ့သို့သောပြတိုက်များ Tromso တက္ကသိုလ်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများအကြောင်းလေ့လာနိုင်သောနေရာ sami လူများ သို့မဟုတ် Lapp နှင့်အံ့မခန်းနှင့်ထူးခြားသောနှင့်အတူပြီးစီးခဲ့သည် အာတိတ် - Alpine ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းခေတ်သစ်တ ဦး တည်းကိုပိုမိုအံ့မခန်းဖြစ်ပါတယ် အာတိတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဥရောပ၌အကြီးဆုံးပြတင်းပေါက်ရှိသည့် ၁၉၆၅ ဆောက်လုပ်ရေး။ Tromso သည်၎င်း၏မြို့ပြဘဝနှင့်၎င်းကျင်းပသည့်ဂီတပွဲတော်များကြောင့်ကျော်ကြားသည်။
သို့သော်ဤဒေသ၏အကောင်းဆုံးကိုမြို့၏ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤသည်ကိုသင်အံ့သြဖွယ်တွေ့မြင်ရန်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနေရာများဖြစ်ကြသည် Aurora borealis, ခေါ်ဆိုမှု "သန်းခေါင်နေရောင်" လည်းများအတွက် ဝေလငါးကြည့်နေတာ။ ဥရောပမြောက်ဘက်စွန်းအထိရောက်နိုင်တယ် မြောက်ကိပ်, အထဲတွင်ငှက်များကိုစောင့်ကြည့် Varanger ကျွန်းဆွယ် နှင့်အတွက်ရေခဲဟိုတယ်၌ထိုညဉ့်ဖြုန်းနေကြတယ် Kirkenes.
နော်ဝေတွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုပြောဆိုပါ fjords ဒါကြောင့်မမေ့နိုင်သောပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ Bergen ဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့သူတချို့အတွက်တံခါးပေါက်ပါ Sogneနော်ဝေတွင်အရှည်ဆုံးနှင့်အနက်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည် တောဘယ်မှာလဲ Trolltunga ကုန်းပြင်မြင့်.
ဘာဂင်မှသင်လည်းရထားဖြင့်သွားနိုင်သည် Flam haciendo ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှပဆုံးရထားလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခု ၏ fjord ၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ခြင်းသည် Aurland နှင့်အံ့မခန်းရေတံခွန်များနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောမြစ်များကိုဖြတ်ကူး။
ဒါပေမယ့်မင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ် ဘာဂန်။ ဥပမာအားဖြင့်, ၏လှပသောရပ်ကွက် Bryggen နှင့် ပုသိမ်နှင့်၎င်း၏သစ်သားအိမ်များနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖွယ်အရောင်ခြယ်သ။ ဒါမှမဟုတ်လှပသောသွားရောက်ကြည့်ရှု Blue Stone Squareဘယ်မှာလဲ San Juan ၏ဘုရားကျောင်း။ ကျနော်တို့ဘုရားကျောင်းအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ပေမယ့် Santa Maria ၏ဘုရားကျောင်း၁၂ ရာစုမှ စတင်၍ မြို့၏ရှေးအကျဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်သည်။ နှင့်လည်း Saint Olaf ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအလွန်နည်းနည်းအားဖြင့်ပြန်။
နောက်ဆုံးတွင်မြို့မတက်ဘဲမြို့မှမထွက်နိုင်ပါ Floyen ၏အမြင်, Floibanen funicular အားဖြင့်ရောက်ရှိနှင့်အရာမှသင် Bergen ကိုယ်တိုင်ကနှင့်လည်း fjords ၏ထူးခြားသောအမြင်များရှိသည်သော။
Alesund သည်နော်ဝေတွင်တွေ့ရမည့် fjords ၏နောက်ထပ်အစဖြစ်သည်
Bergen သည် fjords များကိုမြင်တွေ့ရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Alesund သည်နော်ဝေးတစ်ခွင်လုံးတွင်အထင်ရှားဆုံးသောလည်ပတ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကြောင်း geiranger fjordအဖြစ်စာရင်းဝင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒါပေမယ့်လည်းများစွာသောအခြားသူများလည်းရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကယ်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဤဒေသသည်စံပြဖြစ်သည် တောင်တက် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထဲမှာ၌တည်၏ Andalsnes, ဒီအားကစားလှုပ်ရှားမှု၏နော်ဝေ၏မြို့တော်စဉ်းစားသည်နှင့်သင်သည်အခြားလှပသောရထားလမ်းလမ်းကြောင်းအားဖြင့်သင်ရနိုင်သည့်။
သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည် Alesundအဖြစ်လူသိများတဲ့ကျောက်မျက် « Art Nouveau မြို့» ၎င်းတွင်ရှိသည့်လှပသောဗိသုကာပုံစံ၏အဆောက်အ ဦး အမြောက်အမြားအတွက်ဖြစ်သည်။
၏ဒေသအတွက်အရေးအပါဆုံးမြို့ ကျောက်တံတား, ဒီမြို့အဖြစ်လူသိများသည် "နော်ဒစ်အရသာ၏ဇာတိမြေ" စားသောက်ဆိုင်အမြောက်အများကြောင့်အချို့စားသောက်ဆိုင်များကြောင့်ဖြစ်သည် Michelin ကြယ်ပွင့်။ ဒါ့အပြင်အလယ်ခေတ်မှာနော်ဝေဘာသာရေးမြို့တော်ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းပါတယ် Nidaros ဘုရားရှိခိုးကျောင်းGothic-Elizabethan အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အဆောက်အ ဦး ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအားလုံးသည် Nordic နိုင်ငံများတွင်ရှေးအကျဆုံးမြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Trondheim တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် တက္ကသိုလ်စီးတီး အဘယ်သူ၏သိပ္ပံစွမ်းရည်လှပသောအဆောက်အ ဦ ထဲမှာ, လမ်းဖြင့်, ဖြစ်ကြသည်။ သက်သေပြသကဲ့သို့၎င်းသည်အရေးကြီးသောစစ်ရေးရဲတိုက်လည်းဖြစ်သည် Kristiansen နှင့် Munkholmen ကျွန်းခံတပ်.
သို့သော် Trondelag ဒေသသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကြံပေးသည့်အခြားဆွဲဆောင်မှုများရှိသည်။ ဤသည်သတ္တုတွင်းမြို့၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ရက်ရော, အဲ့ဒါဘာလဲ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် သစ်သားအိမ်များနှင့်ကြေးနီမိုင်းများဖြင့်သင့်အားအချိန်မီပြန်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၏ Inderoy ရွှေလမ်းကြောင်း၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုခံယူထားသော်လည်းအဖိုးတန်ဓာတ်သတ္တုနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ၊
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းသို့သွားသော Svalvard ကျွန်းများ
ဤကျွန်းစုသည်အလယ်၌တည်ရှိသည် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ။ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများမှာစီးနင်းခြင်းဖြစ်သည်ကိုသင်မအံ့သြသင့်ပါ ခွေးစွတ်ဖောင်းကြည့်ပါ Aurora borealis သို့မဟုတ်လည်ပတ်မည် ရေခဲဂူ။ ထို့အပြင်၎င်း၏အရေးအပါဆုံးနေရာဒေသအတွက်, ချစ်သူသင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ပြီးသိချင်စိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်မည် တက္ကသိုလ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မြောက်ဘက်အကျဆုံးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ၏တောင်ဘက်တွင်နော်ဝေလူမျိုးများ၏အားလပ်ရက်ဒေသဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီသည်။ နိုင်ငံ၏အခြားနေရာများနှင့်အခြားနေရာများထက်နာရီပေါင်းများစွာနေရောင်ခြည်ရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့မှာသူတို့ရဲ့အဖြူသစ်သားအိမ်တွေနဲ့တူတဲ့ပုံမှန်ရွာငယ်လေးတွေလည်းရှိတယ် Risol, Grimstad o Arendal။ ပြီးတော့သင်ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင် Setesdal ချိုင့်လှပသောရှုခင်းများနှင့်မြက်မိုးမိုးအဆောက်အအုံများအပြင်နော်ဝေ၏ရှေးအကျဆုံးရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများကိုလည်းသင်လေ့လာလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ဒေသတွင်းမှာအရေးအကြီးဆုံးမြို့ကတော့ Kristiansandသူတို့တစ်တွေပျူငှါနွေးထွေးသောကမ်းခြေရှိသည်။ သို့သော်အားလုံးအထက်, Posebyen ဟောငျးမြို့၁၈၉၂ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမီးကြီးများမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည့်မြို့၏တစ်ခုတည်းသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သစ်ပင်များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသောသစ်သားအိမ်များနှင့်ဆင်ထားသည့်၎င်း၏လမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ရတာပျော်စရာဖြစ်သည်။
သင်၏ကလေးများနှင့်အတူခရီးထွက်လျှင်လည်း Kristiansand ၌သင်ရှိသည် Dyreparkenအပန်းဖြေဥယျာဉ်တစ်ခုနှင့်သူတို့နှစ်သက်သောတိရစ္ဆာန်ရုံလည်းဖြစ်သည်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင် gastronomy ကြိုက်လျှင်, Lindesnes အတွက်သင်မှာစားနိုင်ပါတယ် အောက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးမြေအောက်စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီး Michelin ကြယ်ပွင့်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်အချို့ကိုတွေ့ဖို့မင်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ သူတို့တွင်တစ် ဦး Dovrefjell၏ Jotunheimen နှင့်၏ Rodane။ သင်လည်း browse နိုင်ပါတယ် ရုပ်သံလိုင်းလိုင်း နှင့်တလျှောက်တောင်တက်သွားပါ Gudbrandsdalen ချိုင့်ဝှမ်း.
နှင်းလျှောစီးကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒစ်နိုင်ငံမှာဒီအားကစားကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဘူတာရုံတွေအကြောင်းပြောနေတာကိုသင်မေ့ပျောက်လိမ့်မယ်။ ရုံများကဲ့သို့အချို့သောအကောင်းဆုံး Geilo, ဟိုလူ o Trysil, နော်ဝေ၏အရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
နော်ဝေကအရမ်းအေးတယ်လို့မင်းကိုပြောစရာမလိုဘူး။ နွေးထွေးသည့်နွေရာသီများမှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် နေရောင်ခြည်ပိုနာရီများ။ ဤအပြုအမူသည်နော်ဝေ၏ထူးခြားမှုနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုဒေသရှိအခြားနိုင်ငံများနည်းတူနို ၀ င်ဘာလမှဇန်နဝါရီလကြားတွင် နေကိုမတွေ့နိုင်ဘူး (မြောက်ဘက်စွန်းဒေသများရှိဘာမျှ) ။ သို့သော်မေလကုန်မှဇူလိုင်လကုန်အထိအနည်းငယ်နှင့်အတူသတ်မှတ်ရန်ခဲယဉ်းသည် တစ်နေ့အလင်းနှစ်ဆယ်နာရီ။ ထို့ကြောင့်နော်ဝေကိုကဗျာဆန်ဆန်နာမည်ဖြင့်လူသိများသည် "ညသန်းခေါင်၏မြေ".
ဒါကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီး Nordic နိုင်ငံကိုသွားဖို့အချိန်ကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလို့မရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်မြောက်ပိုင်းအလင်းကိုမြင်လိုလျှင်ဝင်ရမည် ဆောငျးရာသီ။ ဒါပေမယ့်သင်လိုချင်တာကခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်လျှင်သွားဖို့သင့်ကိုအကြံပေးပါမယ် မေလနှင့်စက်တင်ဘာလအကြားရာသီဥတုပျော့ပြောင်းပြီးနေ့တွေအများကြီးပိုနေတယ်၊ ​​ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ။
Nordic နိုင်ငံသို့သွားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်း၏အဓိကလေဆိပ်သည် ေအာ္စလိုဒါပေမယ့်အခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းနိုင်ငံတကာမှာရှိပါတယ် ဘာဂန်, Tromso o Kristiansand။ ထို့အပြင်သင်သည်အဆုံးမှအစကဲ့သို့သောဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများသို့ပျံသန်းနိုင်သည် lofoten ကျွန်းများ, Las Svalvard ပင် မြောက်ကိပ်.
နော်ဝေသို့ရထားဖြင့်လည်းသွားနိုင်သည်။ အော်စလိုသည်ရထားဖြင့်ဆက်သွယ်သည် ကိုပင်ဟေဂင်, စတော့ဟုမ်း o Gothenburg ပြီးတော့ဒီကနေ ဥရောပတစ်ခွင်လုံး။ ဘတ်စ်ကားနှင့်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ သင်လှေကိုပိုနှစ်သက်ပါကလိုင်းများလည်းရှိသည် Alemania, ဒိန်းမတ် y Suecia နော်ဝေရှိအမျိုးမျိုးသောမြို့များမှ။
တိုင်းပြည်အတွင်းသို့ရောက်လျှင်၎င်းကိုဖြတ်သန်း။ သွားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည် tren။ ရှိပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထင်ရှားဆုံးရထားလမ်းအချို့။ သူတို့အထဲမှ၏ Nordland; ၏ ဘာဂန်, ကြီးမားတဲ့တောင်တန်းရှုခင်းများဖြတ်ကျော်; ၏ Flamအကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ကဟော ပြော၍၊ Dovre, သဘာဝအထင်ကရနှင်းဖုံးလွင်ပြင်နှင့်အတူသဘာဝဥယျာဉ်ကိုဖြတ်ကျော်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်နော်ဝေတွင်မည်သည့်အရာကိုတွေ့မြင်ရမည်ကိုသင်စဉ်းစားမိပါက၎င်းသည်သင့်အားမြောက်ပိုင်းအလင်းများထက်များစွာပိုပေးသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးရှိသောရှိပါတယ် သမိုင်းနှင့်အထိမ်းအမှတတွေအများကြီးနှင့်အတူမြို့ကြီးများ, ပြုရန်တွန်းအားပေး တောင်တန်းရှုခင်း ပင် ကမ်းခြေ တိုင်းပြည်၏တောင်ဘက်၌တည်၏။ နော်ဝေကိုသိချင်လို့လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » အဘယ်အရာကိုနော်ဝေတွင်ကြည့်ရှုရန်
တစ် ဦး တည်းခရီးသွားရန်ရည်ရွယ်ထားသည်